HAPADANWI anonzwa uye hama dziri kuita basa sebasa panzvimbo iri kuvakirwa mahofisi makuru eZvapupu zvaJehovha kuWarwick, New York. Hama nehanzvadzi dzakawanda dzakasiya zvimwe zvinhu kuti dzikwanise kuita basa racho. Asi vakawanda vavo vanoti, “Hapana chimwe chinhu chatingaenzanisa nekushanda pano.” Ngatimboonai zviri kuitika kuWarwick.
Kushanda kuWarwick kwakamboita sei chaizvo?
“Haisisiri nyaya yekungovaka chete kuWarwick. Jehovha ari kuita kuti vanhu vanoita mabasa akasiyana-siyana pakuvaka vabatane uye ari kutibatsira kuti tiongorore marongero atinofanira kuita pakuvaka zvivako zvakakura.”—Enrique Ford.
“Pisarema 127:1 inoti: ‘Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanoshanda zvakaoma vachishandira pasina.’ Mashoko iwayo anoratidza kuti chikomborero chaJehovha ndicho chichaita kuti basa iri ribudirire.”—Troy Snyder.
“Basa iri randisimbisa pakutenda kupfuura zvimwe zvinhu zvese zvakaitika muupenyu hwangu.”—Richard Devine.
Vakazvipa Nemwoyo Unoda—kuNew York
Chii chakaita kuti mumwe murume nomudzimai vasiye imba yavo hombe yakanaka yavaida vakanogara muimba duku?